Iijusi zendalo zokwehlisa isisu Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Akukho bugqi xa kufikwa ekunciphiseni ubunzima, eyona ndlela yokufumana iziphumo kukudibanisa ukutya okusempilweni kunye nokuzilolonga rhoqo.
Nangona kunjalo, naluphi na uncedo luyasebenza xa amavili ethunyelwa kude kwisisu, kwaye okunye ukutya kuyinyani xa kufikwa ekunciphiseni amanyathelo, nokuba kungenxa yesenzo sabo se-thermogenic okanye ngenxa yokukwazi ukuthintela ukugcinwa kwamafutha.
Ukuphulukana neencindi ezivela kwisisu kunceda okomileyo yindlela elungileyo yokudibanisa oku kutya kunye nokuzitya ngendlela esempilweni.
1 Ngaba iijusi zesisu ziyasebenza ngokwenene?
2 Iindidi zeejusi zokulahla isisu sakho
2.1 Ijusi yesitshalo seqanda
2.2 Ijusi yeKlabishi
2.3 · Ijusi yelamuni
2.4 Ijusi yeDetox
2.5 · Ijusi eluhlaza
Ngaba iijusi zesisu ziyasebenza ngokwenene?
Ukuba isetyenziswe ngokuchanekileyo, iijusi zesisu azincedi kuphela ukususa amafutha esiswini kodwa nasemzimbeni wonke. Kubalulekile ukutsho ukuba akufuneki zongezwe kwiswekile, kuba oku kuya kuthintela izibonelelo zabo.
IiJusi zokuphulukana nesisu, ubukhulu becala, zenziwe kwiikhalori ezisezantsi, ukutya okune-fiber ephezulu. Oku kubenza ukuba bangatshintshi isidlo kuphela, kodwa banciphise ukutya ukutya kwemihla yonke.
Ifayibha idlala uninzi lwendima ekuhluthweni kuba xa idibana namanzi emathunjini, iyonyusa ubukhulu, ilibazise ukwetyisa kunye nokuthatha indawo.
Ukongeza, bayayikhuthaza kakubi i-hormone insulin, enoxanduva lokuhambisa iswekile egazini iye kwiiseli. Yiyo loo nto, amanqatha amancinci eqokelela, ngakumbi esiswini.
Iindidi zeejusi zokulahla isisu sakho
Ijusi yesitshalo seqanda
Ijusi ye-eggplant ine-vitamin B5 kunye neetyuwa zamaminerali ezifana ne-calcium, isinyithi, i-phosphorus kunye ne-fiber e-soluble. I-Vitamin B5 ikhusela ulusu kwaye inceda ukulawula iinkqubo ze-nervous and digestive. Ukongeza, incindi yayo ilungile ukulwa nokudumba okuhlukeneyo kolusu ngokubanzi. Njengoko inefayibha eninzi enyibilikayo, isitshalo seqanda siluncedo kulawulo lweglucose (ukuqokelela amanqatha amancinci esiswini) kunye nokucinezela ukutya, okuququzelela ukwehla kobunzima. Ingenye yezona ziselo zidumileyo nezisetyenzisiweyo zesisu.
Ikhaphetshu ingumthombo olungileyo wezimbiwa ezifana ne-phosphorus, i-iron (kubalulekile ukuthintela i-anemia), ibalulekile kwimisipha namathambo, kunye ne-antioxidant enamandla. Ikhaphetshu ikwanazo neekhalori kwaye ityebile ngefayibha, ephucula ukusebenza kwamathumbu kwaye ikunika imvakalelo yokugcwala. Yiyo loo nto ikhaphetshu ikunceda utye kancinci kwaye uphulukane nesisu sakho!
Ijusi yeklabishi, edityaniswe nokutya okunesondlo kunye nokuzilolonga rhoqo kukunceda ufikelele kwinjongo yakho yobunzima. Ke qala ukonwabela impilo kunye nokulahleka kwesisindo sale mifuno kubomi bakho bemihla ngemihla! Jonga iiresiphi ezilula zejusi yeklabishi ukunciphisa umzimba.
· Ijusi yelamuni
Ijusi yelamuni ine-detoxifying effect, yiyo loo nto inceda ekuphulukaneni nesisu. Inceda ukuphelisa ityhefu kwaye incedisa nokwetyiswa. Kukwacebile ku-vitamin C, ukonyusa amajoni omzimba, kukuchasana nokudumba kunye nokunceda ukulawula uxinzelelo lwegazi.
Ukongeza, uphononongo lubonisa ukuba ilamuni, ngakumbi kusasa xa uzila ukutya, lukhetho olukhulu lokunciphisa umzimba. Kungenxa yokuba inamandla okulawula imetabolism, ebangela ukuba umzimba uchithe iikhalori ezingaphezulu. Kukutya okuqhelekileyo kwiDemon yokutya, apho incindi yelamuni isetyenziswa kakhulu ukuphulukana nesisu.
Ijusi yedetox isebenza kakhulu xa siqala ukutya. Kungenxa yokuba ulungisa umzimba, owawusetyenziselwa ukutya okungalunganga, kwinqanaba elitsha elisempilweni. Inqanaba le-detox linokunceda kakhulu ekulahlekeni kwesisindo ngokukhupha ityhefu eqokelelwe kukutya okunamafutha, utywala okanye icuba, umzekelo. Ukongeza ijusi yedetox kwisondlo esifanelekileyo sisixhobo esinamandla kuwe sokulahla isisu sakho kunye nokulahla iiponti ezongezelelweyo ezikukhathazayo. Le yeyona jusi yesibini isetyenzisiweyo kwi-detox kuluhlu lwethu.
· Ijusi eluhlaza
Ijusi eluhlaza yenye yesisu sokuphulukana neentshatsheli zejusi namhlanje. Kukuziva okutsha okwangoku, kwawa emlonyeni wabantu nakwindebe yodumo.
Isithembiso sokuphulukana nobunzima ukuya kuthi ga kwi-5 kg ​​ngenyanga, kwimeko apho incindi yejusi isesinye sezidlo ezinkulu zosuku (isidlo sakusasa, isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa). Kodwa ke lumka: ukuphuma uyokutshintsha isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa ngejusi kwaye uxhokonxe kwaye njengoko ufuna kwimenyu ngokwayo inokulimaza impilo kwaye ayiboniswanga. Akukho nto inefuthe elingaphezulu kokutya okulinganiselweyo.
Ijusi inezithako zayo ezisisiseko ikhaphetshu, iseleri, ikhukhamba kunye nesipinatshi, kwaye ihlala isongezwa kwiziqhamo. Inokuba nokutya okuziinkozo okusebenzayo kunye nolwelo olusetyenziselwa ukuxutywa kwalo kukwahluka, njengetayi, iijusi, amanzi okanye amanzi ecoconut. Eyona asethi inkulu yesiselo ukunceda ekwehliseni ubunzima bayo kukudambisa amandla, umanyano phakathi kokusetyenziswa kwefayibha kunye ne-hydration kunye necocktail yezondlo ezinikezwe ngumxube weziqhamo kunye nemifuno kwiiresiphi.